ဉာဏ်ရည်ဆိုင်ရာလိုက်စားခြင်းက ဦး နှောက်ကိုစွဲလမ်းမှုမှကာကွယ်ပေးသည် (2015) - Your Brain On Porn
ဆေးပညာနှင့်ကျန်းမာရေး / အာရုံကြောသိပ္ပံတွင် Yasmin Anwar မှဇူလိုင်လ ၁၄၊ ၂၀၁၅
ကြွက်၏လေ့လာမှုအသစ်ဉာဏရေးရာမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏မြှူဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးခံနိုင်ရည်စေနိုင်သည်ကိုတွေ့။ Credit: အမ်မလီထူးဆန်း
UC Berkeley ၏ကြွက်များ၏လေ့လာမှုအသစ်သည်လှုံ့ဆော်မှုရှိသောသင်ယူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်အချိန်တိုလေးပင်လျှင် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်စနစ်ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုမှုမှကာကွယ်ရန်နှင့်၎င်းအားကာကွယ်နိုင်ကြောင်း ဦး နှောက်တွင်စွဲစွဲလမ်းစေသောအယူအဆကိုစိန်ခေါ်သည်။
ခြေရာခံသိပ္ပံပညာရှင်များက ကိုကင်းမတရားသော 70 အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးထက် သာ. ကြွက် နှင့်သူ၏နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းဝှက်ထားသောအရသာရှိတဲ့တဖဲ့ကိုသူတို့ကင်းပေးထားခဲ့တဲ့အခန်းဖြေရှာသူတို့၏သန့်စင်-ဆုံးရှုံးများထက်လျော့နည်းဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်သင်ယူခြင်းနှင့်ရှာဖွေတာ, တူးဖော်ရေးပါဝင်သည်သူတွေကိုကြွက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
UC Berkeley မှစိတ်ပညာနှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံလက်ထောက်ပါမောက္ခ Linda Wilbrecht က "ကိုကင်းသည်အတွေ့အကြုံရလာသောအခါသူတို့၏ ဦး နှောက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းစေသည့်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုလေ့လာခြင်းနှင့်လေ့လာခြင်းတို့သည်သူတို့၏ဆုလာဘ်စနစ်များကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ဂျာနယ်မှာထုတ်ဝေတဲ့စက္ကူရဲ့ Neuropharmacology.
ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, ဥာဏ်ရည်စိန်ခေါ်နှင့် / သို့မဟုတ်သူ၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အစားအစာကန့်သတ်ခဲ့ကြသည်မဟုတ်သူကြွက်ကိုသူတို့အဆုံးအပေါ်ပတ်ကိုကင်းနှင့်အတူထိုးသွင်းခဲ့ရှိရာရပ်ကွက်ကိုပြန်သွားဖို့စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ကြသည်။
လေ့လာမှုကို ဦး ဆောင်ရေးသားသူဂျိုစီယာဘို ၀ န်ကပြောကြားသည်မှာ - ဆင်းရဲသောအခြေအနေတွင်နေထိုင်သောကြွက်များသည်လှုံ့ဆော်မှုရှိသောပတ်ဝန်းကျင်ရှိသူများထက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှုန်းမြင့်မားကြောင်းပြသသည်။ Ph.D ဘွဲ့ကို UC Berkeley တွင်သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့သည့် UC San Francisco ရှိ neuroscience မှကျောင်းသား။
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုတို့သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကုန်အကျများပြီးအဖျက်စွမ်းအားကြီးမားပြီးပြproblemsနာများစွာကိုကျော်လွှားနိုင်သောပြseemနာများဖြစ်သည်။ ယခင်လေ့လာမှုများအရဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ စိတ်ဒဏ်ရာ၊ စိတ်ရောဂါနှင့်အခြားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဇီဝကမ္မစိတ်ဖိစီးမှုများက ဦး နှောက်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုပြောင်းလဲစေပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေသည်။
"ငါတို့ရဲ့အချက်အလက်တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာကောင်းမွန်တဲ့သင်ယူမှုအတွေ့အကြုံတွေ၊ ပညာရေးဒါမှမဟုတ်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပတ် ၀ န်းကျင်မှာကစားခြင်းအားဖြင့်အန္တရာယ်ကျရောက်လွယ်သူများအတွက်ခံနိုင်ရည်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ဦး နှောက်ပတ်လမ်းကိုတီထွင်နိုင်ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်တယ်၊ အတော်လေးအချိန်ကြာမြင့်စွာ, "Wilbrecht ကဆိုသည်။
ဆုံးရှုံးကြွက် vs. ဥာဏ်စိန်ခေါ်ကြွက်
သုတေသီများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအထူးသဖြင့်ကိုကင်းကိုကြွက်သုံးကောင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုသို့မဟုတ်“ လေ့ကျင့်ထားသော” ကြွက်များကိုစူးစမ်းရှာဖွေခြင်း၊ မက်လုံးများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုအခြေခံသည့်ကိုးရက်ကြာသိမြင်မှုဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် ၄ င်းတို့၏“ ထမ်းပိုးမှလေ့ကျင့်ထားသော” လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ ဆုတွေရပေမယ့်အခက်အခဲမရှိဘူး။ စံသတ်မှတ်ထားသည့်အိမ်တွင်းကြွက်များသည်အစားအစာနှင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုကန့်သတ်ထားသောသူတို့၏အိမ်၌အိတ်များ၌ရှိနေသည်။
နာရီအနည်းငယ်အသီးအသီးနေ့, လေ့ကျင့်သင်ကြားကြွက်အဘို့နှင့်ထမ်းပိုး-to-လေ့ကျင့်သင်ကြားကြွက်ကပ်လျက်အခန်းချောင်သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါလေ့ကျင့်သင်ကြားကြွက်စူးစမ်းခြင်းနှင့်ရနံ့သစ်သားရိတ်တစ်အိုး၌ပျားရည် Nut Cheerios တက်တူးထည့်သွင်းထားတဲ့သန့်စင်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လွတ်ကြ၏။ အဆိုပါရယူထားသောရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လိုအဘို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပုံမှန်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းကိုသူတို့ခြေချောင်းပေါ်သူတို့ကိုစောင့်လေ၏။
ဤအတောအတွင်းသူတို့၏ လက်ခံ. -to-လေ့ကျင့်သင်ကြား counterparts တွေကိုတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ဟာသူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားမိတ်ဖက်ထီပေါက်ထိမှန်ပေမယ်ထိုသို့အလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါတဲ့ပျားရည် Nut Cheerio ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ စံ-သျောကြွက်ကြောင့်သူတို့သန့်စင်ခွင့်အလမ်းများကိုသို့မဟုတ်ပျားရည် Nut Cheerios မပါဘဲသူတို့ရဲ့လှောင်အိမ်ထဲမှာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှု၏သိမြင်မှုလေ့ကျင့်ရေးအဆင့်ပြီးနောက်ကြွက်၏သုံးခုစလုံးစုံကိုတစ်လအဘို့မိမိတို့အိတ်များအတွက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ထို့နောက်ကြွက်အနံ့, texture နှင့်ပုံစံအတွက်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အနေဖြင့်ကွဲပြားသော plexiglass box ကိုနှစ်ခုယျြအခန်းများစူးစမ်းဖို့, တဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းချောင်သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါသုတေသီများတစ်ခုချင်းစီကို mouse ကိုပိုမိုနှစ်သက်ပြီးတော့သူတို့ထပ်တလဲလဲမျက်နှာသာမပေးဖူးသောအခန်းကသူတို့ကိုကင်းပေးခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ preference ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့အကြောင်းကိုသတ်မှတ်ထားသည့်အခန်းထဲကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။
စမ်းသပ်ရှာဖွေလျက်မူးယစ်ဆေးဝါးအဘို့, ကြွက်လှောင်ပြောင်ထိုးလက်ခံရရှိနှင့်နောက်ကျောနှင့်ထွက် scamper ဖို့ပွင့်လင်းတံခါးသုံးပြီး 20 မိနစ်နှစ်ဦးစလုံးအခန်းတို့လေ့လာစူးစမ်းဖို့လွတ်မြောက်လာခဲ့ကြသည်။ ပထမတော့အပေါငျးတို့သကြွက်အများစုသူတို့ယူဆရသည့်ကိုကင်းပျော်မွေ့ရာအခန်းထဲသို့ပြန်လာကြ၏။ သို့သော်စမ်းသပ်မှုရှာကြံနောက်ဆက်တွဲအပတ်စဉ်မူးယစ်ထဲမှာ, ကြွက်သူကိုလက်ခံရရှိခဲ့ သိမြင်မှုလေ့ကျင့်ရေး သူတို့ကင်းအပေါ်မြင့်မားခဲ့ရှိရာအခန်းထဲသို့အဘို့လျော့နည်း preference ကိုပြသခဲ့သည်။ ထိုပုံစံကဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်ကထောက်ပံ့သည် - ဘာကလေ